ဂမ္ဘီရ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဂမ္ဘီရ	# အရောင်(၉)ရောင် နှင့် စိတ်သဘောထားPublished April 13, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	အရောင်တွေမှာ မူလအခြေခံအရောင် (၃)ရောင် ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက “အနီရောင် ၊ အ၀ါရောင် နဲ့ အပြာရောင်” တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ (၃)ရောင်ကို ခရမ်း ၊ အညို ၊ အစိမ်း ၊ အနက် နဲ့ မီးခိုးရောင်တွေ ရအောင် ရောစပ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီတော့ အရောင်(၈)ရောင် ရပါတယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ, အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | Tagged အနီရောင်, အရောင် နှင့် စိတ်နေသဘောထား, အရောင် နှင့် ဗေဒင်, အခြေခံအရောင်(၃)မျိုး, အပြာရောင်, အ၀ါရောင်, ဗေဒင်ပညာ နှင့် အရောင်, ရောင်စဉ်(၇)ပါး |7Comments	# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းPublished June 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာနဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာချင်ကြသူများအတွက် အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းလေး တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဗေဒင်ဆရာ ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဘူးဗျ။ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကို ရှာရတယ်။ဟောတာ မှန်/မမှန်ကို လည်း စုံစမ်းရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေပေး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး “ယတြာ” နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဆရာလိမ် ၊ ဆရာတုတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်း ကြောက်ရသေး သဗျ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ကိုယ်တိုင်မေး ဗေဒင်, စာချခြင်း, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ယိချင်း ဗေဒင်, အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်, ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း	# ဖုန်းရွှေ လာပြီPublished September 27, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Feng shui, MaHaBote, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ဖုန်းရွှေ, ဘုတ်ကြီး(၈)ပါး ဗေဒင်, ယိချင်း, အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်မှု ပညာ	# အိပ်မက် . . (၂)Published August 12, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ဂမ္ဘီရ, မဟာဘုတ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများPublished February 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	၉ ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ အတော် ရေပန်းစားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ “မြန်မာ့ဂမ္ဘီရ လောက” မှာ အတော်ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း အဓိဌာန်” တို့၊ “၉ န၀င်း မိုးအလင်း” တို့၊ “၉ န၀င်းစီး ယတြာ“ တို့၊ “၉ န၀င်းသင်္ချိုင်း သံဒါး”တို့ “၉ န၀င်း ထွက်ရပ်လမ်း”၊ “၉ န၀င်း ဆေးတော်ကြီး” “၉ မြို့ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်” . . “၉ တိုင်း ၉ ဌာန” “တြိစက္က ကိုးန၀င်းဇာတာ” တို့ဆိုတာ ပုတီးလိုင်း၊ ဗေဒင်လိုင်း၊ ဂမ္ဘီရလိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နားမစိမ်းကြပါဘူး။
Posted in ဂမ္ဘီရ, နာမက္ခရဗေဒ, သင်္ချာဗေဒ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 18 Comments	# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . .Published December 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 57 Comments	# ရောင်စုံခြယ်တဲ့ကမ္ဘာPublished December 5, 2009 | By dr.tin bo bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, ရောင်စုံခြယ်တဲ့ကမ္ဘာ |6Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,417)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,954)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,489)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,292)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,375)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,535)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,562)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,927)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,276)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,262)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,082)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,046)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,808)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,748)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,294)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,108)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,830)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,465)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,181)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,133)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,540)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,456)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,252)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,217)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,886)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,664)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,468)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,007)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !